Isma Doorin Daalinkaynu Dirniyo Dawaca Qabsaday !
Wali Gumucu Meel Baydhsanbuu Gawda Ku Hayaa !
Xibiga kulmiye doorashadii wuu ku guulaystay laakiin sida aynu arkayno ma jirin hadaf cad ama hiigsi aan ahayn in muuse madaxweyne noqdo oo kaliya, sida muuqata ma jirin qorshe horumarineed oo dalka gobol degmo iyo tuulo toona loogu talo galay, dalka caasimadiisu waa hargeisa dalkoo dhamina siduu yahay ahaana jiray ama iminkaba yahay waa hargeisa walina hilinkii hore lagama leexan sababtuna waynu garanaynaa kana wada dharagsanahay !
Miisaaniyada la odoroso ee laynoo soo bandhiga marka indho caafimaad qaba lagu eego way ka badantahay lacagta dalka gasha sifo kasta ha ku gashee hadaanay ahayn dabin ay dawladu sanad walba isu maleegto !
Wasaaradaha laamahooda gobaladu waa fadhiid mana aha goobo shaqo shaqsiyaadka ka musuulka ahina waa magac u yaal ku mushahar qaata xilka uu hayo adeeg ka hirgala oo ay fuliyaana haba yaraatee ma jiro wax kasta ood u baahato waa inaad hargeisa ka soo dhamaystaa adoo waliba ku niyad san !
Bulshadu kuma baraarugsana waxa ka maqan iyo waxa ay xaqa u leeyihiin midna oo sidanaa sax u ah oo kaabayaasha iyo adeegyada ka maqan midna hore umay arag isagoo shaqaynaya inay u baahanyihiin way danisanyihiin laakiin baahida ah inay shaqayso xarunkastaa ma oga faa’idada ay leedahay !
Sabaalada iyo niyad samida ay umadu ku nooshay maaha mid ay ka gudbaan ee waa waxay la mid tahay giraan wareegsan oon af laga baxo lahayn laguma dul soconaayo laysma gaadho laysmana dhaafo lama kala dheereeyo lagamana dhaco giraantaa !
Wali maynaan arag baraarujin iyo wacyi galin umada loogu tilmaamaayo jihada saxda ah iyo taaba galinta waxa ay tabayaan iyo hilinka toosan Idaacadaha TV yada iyo madaxduba yagaa isku mashquulsan oo midiba midbuu booska ka riixanayaa dantii guudna mid gaar ahaaneedba ka fulin iyo feejignaanba badatay
Hashu Maankayga Gadaye Ma Maasaarbay Liqday ?
Safwaan Sacad Ahmed